शब्दकोश - Binary optionsBinary options
बाइनरी विकल्प (“बाइनरी विकल्प”):
बाइनरी विकल्प छन् one of the most popular वित्तीय साधन र तरिका को पैसा लगानी online. निर्धारण गर्न छ, को मूल्य निर्देशन को एक विशेष सम्पत्ति, उदाहरणका लागि, मूल्य, एक मुद्रा को लागि, एक विशिष्ट अवधि छ । मुख्यतया यो माध्यम गरेको छ, एक अन्तिम सम्पत्ति खरीद मा जो व्यापारी निवेश आफ्नो धन, जो को लाभ या हानि मा निर्भर परिवर्तन मा सम्पत्ति को मूल्य छ । एक स्थिति छ जब एक व्यापारी निर्णय गर्न सम्पत्ति बेच्न मा वित्तीय बजार गर्दा यसको मूल्य वृद्धि, त्यहाँ छ एक बोध को मुनाफा । जब मामला मा एक निवेशक बेच्छ एक उपकरण बजार मा, जब यसको मूल्य खसेको छ, त्यहाँ कार्यान्वयन हानि ।
परिभाषा को बाइनरी विकल्प
अवधि “बाइनरी” मतलब ” को मिलेर दुई भागहरु । यो मानिएको छ कि आय को मामला मा बाइनरी विकल्प को अवधारणा को यस रूप लिन्छ को आधार को वृद्धि (कल) वा पतन (राखे”) एक विशिष्ट सम्पत्ति हो ।
गर्न चाहे भविष्यवाणी मूल्य को सम्पत्ति वृद्धि वा गिरावट हुनेछ, पहिलो स्थानमा तपाईं चयन गर्नुपर्छ प्रकार को सम्पत्ति हो । यो हुन सक्छ, उदाहरणका लागि, मुद्रा, स्टक, वस्तुहरु, कारोबारी. एउटा उदाहरण हुनेछ एक विकल्प उपकरण को रूप मा एक जोडी को मुद्राहरू EUR र USD, त्यसपछि निवेशक वहन उच्चता को एक मुद्रा (उदाहरणका लागि, अर्थ एक घण्टा मा यूरो नाटकीय वृद्धि हुनेछ र पुग्न हुनेछ, एक उच्च मूल्य भन्दा USD), र यदि टाइप सही छ, हामी प्राप्त लागत राशि, प्लस पनि निवेश राशि ।
बाइनरी विकल्प दलाल:
बाइनरी विकल्प दलाल को रूप लिन्छ मध्यस्थ निवेशक मा शेयर बजार । आफ्नो कार्य गर्न खाता को एक प्रतिनिधिको रूपमा, यो खरीदार र विक्रेता को विकल्प छ । यो टिप्पण लायक छ कि दलाल लागि जिम्मेवारी ग्रहण गर्दैन निर्णय, तर लागि मात्र जिम्मेवार को कार्यान्वयन आदेश को निवेशक.
एक दलाल पनि हुन सक्छ दलाली कम्पनीहरु मा लगी बिचौलिया छ, जो को खरीद र बिक्री को वित्तीय साधन मा जमानत विनिमय । पनि यस मामला मा चार्ज लेनदेन शुल्क ।
मान्छे हो अनुभवहीन मानिसहरू जो begin आफ्नो साहसिक बाइनरी विकल्प, अक्सर कठिनाइहरू छन् छान्ने मा सही दलाल । यो उद्देश्य लागि, हामी समीक्षा विस्तार मा हाम्रो अर्को र्याङ्किङ्ग को सबै भन्दा राम्रो दलाली प्लेटफार्महो, जो सबैभन्दा सिफारिस गरिएको छ, र यो छ सबै भन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय दलाली मंच. हरेक दलाल प्रस्ताव हाम्रो विस्तृत समीक्षा र को विवरण जहाँ व्यापारी (निवेशक) पहुँच प्राप्त गर्न बारेमा विस्तृत जानकारी दलाल ।
विकल्प “कल” छ, एक फारम को लगानी मा बाइनरी विकल्प । यो विकल्प संग, व्यापारी भनेर predicts मूल्य को जन्माउने सम्पत्ति को समय मा म्याद समाप्त हुने निश्चित विकल्प वृद्धि हुनेछ, र हुनेछ भन्दा उच्च सुरुमा मूल्य छ । एक कल विकल्प अक्सर फेला दलाली प्लेटफार्म, साथै विकल्प “माथि“माथि छ ।
विकल्प “राखे“छ, एक फारम को लगानी मा बाइनरी विकल्प । यो विकल्प प्रयोग, निवेशक मान्छ कि मूल्य को अंतर्निहित सम्पत्ति मा एक विशेष समय को समाप्ति को विकल्प decreases, छ कि, यो मूल्य भन्दा कम हुनेछ, को सुरुमा मूल्य, खरीद को समय मा विकल्प को छ । विकल्प “राखे” अक्सर फेला दलाली प्लेटफार्म, साथै “तल“र तल ।
न्यूनतम जम्मा निर्धारण न्यूनतम रकम जम्मा गर्न खाता मा एक दलाली मंच. सबैभन्दा दलाल भन्ने कुरामा सहमत न्यूनतम जम्मा आवश्यक छ$ 100, तर पनि दलाल प्रस्ताव न्यूनतम जम्मा$ 10. निवेशक भएको, एउटै राशि मा उनको खाता शुरू गर्न सक्छन् पूर्वानुमान सञ्चालन ।
लागि एक न्यूनतम लेनदेन लिएका हुन कि राशि को प्रयोगकर्ता प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ प्रदर्शन गर्न चयन व्यापार मा कुनै पनि समय. सबैभन्दा दलाल को न्यूनतम रकम लेनदेन अधिक गर्दैन$ 25 मा यसरी, मान्छे beginners एक लगानी को सानो मात्रा पैसा ।
सम्पत्ति-यो भन्ने छैन अन्य, माथि उल्लेख रूपमा, यो उपकरण आधार छ । उद्यमी सुरु गर्न चाहन्छ जो लगानी मा बाइनरी विकल्प एक विकल्प बनाउन आवश्यक को विशिष्ट जो सम्पत्ति, को फारम लिन सक्छन्:
मुद्रा (मुद्रा जोडी, e.g. EUR / USD)
सबै भन्दा ठूलो दलाल मा छ आफ्नो मंच भन्दा पनि अधिक 150 विभिन्न सम्पत्ति छ । वेबसाइट मा, साथै एक विस्तृत सूची सम्पत्ति को प्रतिनिधित्व पनि समय को लम्बाइ मा सम्भव छ जो गर्न व्यापार यो साधन, आधारभूत र अन्य अतिरिक्त मदत गर्नेछ भनेर जानकारी तपाईं बनाउन लगानी छ ।
यो समारोह एक “स्पर्श”:
समारोह “कोएक स्पर्शछ” एक प्रकार को बाइनरी विकल्प संग उच्चतम संभावना को लाभ देखि एक लेनदेन. निवेशक चयन विकल्प “एक स्पर्श कल” मान्छ कि मूल्य को छान्नुभएको साधन सम्पत्ति पुग्नेछ वृद्धि मा एक निश्चित बिन्दु को समाप्ति को विकल्प, अर्थात् भन्दा उच्च हुनेछ खरीद को समय मा विकल्प को छ । निवेशक, खरीदार विकल्प “एक स्पर्श राखे” सुझाव विपरीत, यो हो भन्ने विश्वास छ कि मूल्य को चयन साधन आधार zniży मा एक निश्चित समय को समाप्ति, त्यसपछि त्यहाँ भन्दा कम हुनेछ सुरुमा चरण मा छ ।
विकल्प “तल/माथि” को एक छ, सबैभन्दा लोकप्रिय प्रकार को बाइनरी विकल्प beginners. यो लिन सक्छन् को रूप मा एक कल विकल्प “कल” (माथि), निवेशक, खरीदार डाटा आधार, सुझाव कि वृद्धि हुनेछ, कि छ, यसको मूल्य भन्दा उच्च हुनेछ सुरुमा चरण मा छ । भने प्रयोगकर्ता चयन विकल्प राखे (“तल”)implies एक कमी को मूल्य मा छान्नुभएको सम्पत्ति, यसको मतलब यो हो कि यो कम हुनेछ भन्दा सुरुमा चरण मा छ ।
विकल्प 60 सेकेन्ड, अर्थात् 60 सेकेन्ड:
विकल्प “मा 60 सेकेन्डको छ” विकल्प र विकल्प रणनीति छ । तिनीहरूले ती छनौट गर्ने हो, अनुभव रूपमा यो हुन सक्छ, उच्च जोखिम संग सम्बन्धित लेनदेन, तर एकै समयमा बढाने को विकास को सबै भन्दा ठूलो लाभ छ । यो समारोह , यसको नाम implies रूपमा, लगाएको छ को शीर्ष मा म्याद समाप्त हुने समय छ, जो 60 सेकेन्ड ( भनिन्छ एक अल्पकालीन विकल्प).